नेहा कक्कडले बाथटप फोटो सार्वजनिक गरेपछि हंगामा, श्रीमान रोहनप्रीतले पनि दिए यस्तो प्रतिक्रिया – Halkhabar kura
१९ असार २०७८, शनिबार १०:४२
नेहा कक्कडले बाथटप फोटो सार्वजनिक गरेपछि हंगामा, श्रीमान रोहनप्रीतले पनि दिए यस्तो प्रतिक्रिया
बलिउड प्लेब्याक सिंगर नेहा कक्कड अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाएकी छन्। उनी कहिले आफ्नो भिडियोले दर्शकलाई इन्टरटेन गर्छिन भने कहिले ग्ल्यामर्स फोटोले सबैलाई चकित पार्छिन्। हालै उनले बाथरोब लुक शेयर गरेकी छन्।
नेहा कक्कडले आफ्नो अफिशियल इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा आफ्नो तीन फोटो शेयर गरेकी छन्। जसमा उनी बाथरोबमा पोज दिईरहेकी छन्।नेहा कक्कडको फोटोलाई सबैले मन पराएका छन्। साथै फ्यानले उनको फोटोलाई निकै मन पराएका छन्।
उनको लुक र स्टाइलको सबैले प्रशंशा गरेका छन्। नेहाको श्रीमान रोहनप्रीत सिंहले पनि ‘ कति सुन्दर तिमि’ भन्दै कमेन्ट गरेका छन्।नेहाको ग्ल्यामर्स फोटोमा उनको भाइ टोनी कक्कडले पनि माया बर्साएका छन्। टोनीले कमेन्टमा ‘कति राम्री’ भनेर लेखेका छन्। नेहा कक्कड सिंगिंग रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल १२’ मा धमाल मचाउदैछिन्।
Previous किन छाडे दीप श्रेष्ठले भ्वाइस अफ नेपाल ? उनको ठाउँमा को आए ?
Next ७० जना राष्ट्रिय गहनाहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश, सभापति देउवाले गरे भव्य स्वागत